Ubumenyezi uSanta Lucia - Amaphrojekthi wezezakhiwo - awodwa
IKhabinedi yaNgqongqoshe izobheka ukuthi amaphrojekthi wezezakhiwo azofakwa ohlwini oluvunyiwe lobunikazi boHlelo Lokutshalwa Kwezimali. Amaphrojekthi wempahla evunyiwe awela ezigabeni ezimbili ezibanzi:
Uma sekuvunyelwe, iphrojekthi yezezakhiwo itholakala ngokutshalwa kwemali efanele abafakizicelo zokuba yizakhamuzi ngotshalomali.
Umfakisicelo kudingeka enze isivumelwano esibophayo sokuthenga nokuthengisa ngokutshala imali kuphrojekthi evunyelwe yokuthengisa izindlu. Ukutshalwa kwemali, okulingana nentengo okuvunyelwene ngayo, kufakwa kwi-akhawunti evunyelwe engenakulungiswa e-escrow ephethwe ngokubambisana ngunjiniyela kanye neC Citizenhip by Investment Unit e-Saint Lucia.
Lapho isicelo sobuzakhamizi ngokutshala imali kumklamo wezezakhiwo selunqunyiwe, ukutshala imali okulandelayo kuyadingeka: